ट्विटरमा एलन मस्कका आधाजसो फलोअर्स नक्कली
काठमाण्डौ । सोसल मिडिया कम्पनी ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा खरिद गरेका एलन मस्कले ट्विटरमा रहेको नक्कली अकाउन्टको समस्यालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, यही समस्याले भने उनलाई धेरै फाइदा पुगेको छ। ट्विटर अडिट टुल स्पार्कटोरोका अनुसार मस्कलाई ट्विटरमा फलो गर्ने ८.७९ करोड मानिसमध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात आधाजसो फलोअर्स नक्कली छन्।...
चिन्ताजनक स्तरमा श्रीलंकाको मुद्रास्फीति, अत्यावश्यक खाद्यान्नको हाहाकार
काठमाण्डौ । गहिरो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा मुद्रास्फीति दर चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण अप्रिलमा मुद्रास्फीति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको हो। जब कि मार्चमा मुद्रास्फीति १८.७ प्रतिशतमात्रै थियो। श्रीलंकाको जनगणना तथा तथ्यांक कार्यालयले आइतबार अप्रिल महिनाको मुद्रास्फीतिको...
एलन मस्कले ट्विटरमा के–के परिवर्तन गर्लान् ?
काठमाण्डौ । यदि प्रस्तावित ४४ अर्ब डलरको सम्झौता पूर्णता पायो भने एलन मस्कले ट्विटरलाई रुपान्तरण गर्ने योजना तयार पारिसकेको बताइएको छ। एलन मस्कको योजना के हो ? यसका बारेमा ठोस जानकारी छैन। तर, एलन मस्कको ट्विटर आगामी दिनमा कस्तो हुनेछ र यसमा सम्भावित परिवर्तन के–के हुनेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। फ्री स्पिच टाउन स्�...
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्नसक्ने, देखिन थाले यस्ता संकेत
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा मन्दी चपेटामा पर्न सक्ने देखिएको छ। मुद्रास्फीति चरम सीमामा छ। ब्याज दर बढिरहेको छ। घर बिक्री लगातार घटिरहेको छ। सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकाको जीडीपी घटेको छ। अमेरिकी सेयर बजारका लागि पनि अप्रिल महिना निकै खराब रह्यो। अप्रिल २००८ को अक्टोबर पछि नास्डाकका लागि...
सेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ ? एलन मस्कले दिए यस्तो सल्लाह
काठमाण्डौ । यदि तपाइँ पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ भने विश्वकै धनीव्यक्ति एलन मस्कको यो सल्लाह निकै काम लाग्न सक्छ। धेरै सफल कम्पनी बनाएका अमेरिकी उद्यमी मस्क सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी ट्विटरमा निकै सक्रिय छन्। भर्खरै उनले ट्विटर किनेका छन्। यसैबीच मस्कले हालैको पोस्टमा सेयर बजारका लगानीकर्तालाई कहिले बजारमा पैसा लगानी गर्ने र...
किन धमाधम बाहिरिँदैछन् भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ता ? यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । विदेशी लगानीकर्ताले अप्रिल महिनामा मात्रै भारतीय सेयर बजारबाट १७ हजार १४४ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको लगानी फिर्ता लगेका छन्। अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले आक्रामक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने आशंकाका बीच विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय सेयर बजारबाट आफ्नो लगानी झिकेका हुन्। विदेशी लगानीकर्ता भारतीय सेयरबजारबाट बाहिरिने क्रम...
परमाणु ऊर्जाले ग्यास र तेलमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ला ?
काठमाण्डौ । इन्धन प्रयोगको विषयमा विश्व जगत यतिबेला कठिन अवस्थामा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको यो अवस्थामा जीवाश्क इन्धनको प्रयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ र विश्वबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। ऊर्जाको यो संकट रुस–युक्रेन युद्धबाट थप उजागर भएको...
ईयूले भित्र्यायो २ महिनामै ४६ बिलियन डलरको रुसी इन्धन
काठमाण्डौ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको दुई महिनाको अवधिमा युरोपेली युनियन (ईयू) ले रुसबाट ४४ बिलियन युरो (४६.३ बिलियन डलर)बराबरको इन्धन आयात गरेको छ। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एअरले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। केही आपूर्तिकर्ताले रुसी इन्धनमा प्रतिबन्ध लगाएर अन्य विकल्प खोजे पनि युरोपेली...
बिटक्वाइनलाई मुद्राको मान्यता दिने विश्वको दोस्रो देश बन्यो सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक
काठमाण्डौ । सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक बिटक्वाइनलाई कानुनी रुपमा मुद्राको मान्यता दिने विश्वको दोस्रो देश बनेको छ। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकका सांसदहरुले बिटक्वाइनलाई कानुनीमा रुपमा मुद्राको मान्यता दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेका छन्। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक विश्वको गरिब देशमध्ये एक हो। तर, यो देशमा हीरा, सुन र...
इन्डोनेसियाद्वारा पाम तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध, नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाण्डौ । इन्डोनेसियाले पाम तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। इन्डोनेसिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पाम तेल निर्यातकर्ता देश हो। इन्डोनेसिया सरकारले अप्रिल २८ देखि पाम तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने वनस्पति तेलको निर्यातमा इन्डोनेसियाले प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वव्यापी खाद्य...
सन् २०२४ सम्म महँगी कायमै रहने, गरिबी उन्मूलनको लक्ष्यमा धक्का
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर वृद्धि भइरहेको महँगी सन् २०२४ सम्म कायमै रहने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार विगत दुई वर्षमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि सन् १९७३ को तेल संकटपछिकै ठूलो हो। त्यस्तै खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि सन् २००८...
तेलको मूल्यवृद्धिले यी देशहरु मालामाल, अर्थतन्त्रमा उछाल
काठमाण्डौ। यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमानबीच तेल निर्यातकर्ता अरब देशहरु ऊर्जाको उच्च मूल्यका कारण मालामाल हुने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो। रिपोर्टका अनुसार तेलको मूल्यमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले अरब देशहरुको अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ...
अनपेक्षित कमाइबीच यसकारण फेसबुकको सेयरमूल्यमा उछाल
काठमाण्डौ । सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा मेटा (फेसबुक)को कमाइ अपेक्षाअनुरुप नभए पनि कम्पनीको सेयरमूल्यमा भने उछाल आएको छ। कम्पनीको आय विवरण बुधबारसार्वजनिक भएपश्चात कम्पनीको सेयरमूल्य १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। फेसबुकको प्रयोगकर्ताको संख्या अपेक्षाभन्दा कम भए पनि लगानीकर्ताहरु सम्भवतः यो संख्यादेखि खुसी देखिएका छन्। फेसबुकको...
यस्तो छ एलन मस्कले ट्विटर किन्नुको रोचक कहानी
काठमाण्डौ । मिति : सन् २०२१ डिसेम्बर २१। समय : राति ११.२० बजे। टेस्लाका संस्थापक एलन मस्कले ट्विट गर्दै लेखे, ‘आई लभ ट्विटर।’ मस्कको यो ट्विटप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकी पत्रकार डेभ स्मिथले ‘ट्विटर मनपर्छ भने यसलाई किन खरिद गर्नुहुन्न ?’ भनेर सोधे मस्कले पनि प्रतिप्रश्न गरे, ‘ट्विटरको मूल्य कति होला ?’ यो घटनाको ५२...
मे ४ मा लन्च हुँदै एआईसी भारतको आईपीओ, बीमितले पाउनेछन् यस्तो छुट
काठमाण्डौ। भारतको जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलआईसी)को आईपीओ आउँदो मे ४ बाट निष्कासन हुने भएको छ। लगानीकर्ताले मे ९ गतेसम्म यो आईपीओमा आवेदन दिन पाउनेछन्। एलआईसीको आईपीओ निष्कासनबारे जानकारी दिँदै लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग (डीआईपीएएम)का सचिव तुहिनकान्त पाण्डेले भने, ‘सेयरका भारु ९०२ देखि...